Qabsoon Oromoo Tokko… Qabsaawonni isaa garuu adda kudha tokko! | freedomfororomo
Posted by Itana Guteta on July 2, 2013
Adooleessa 02, 2013 | Komataa Sabaa irraa
Lammii Afrikaa Kibbaati. Luuba beekamaa, qabsoo hodhooftuu gurraachi Afrikaa kibbaa cunqursaa warra adii jalaa bahuuf taasise keessatti nama qooda guddaa taphate. Dismoondi Tuuttuu. Luubni kun yeroo tokko biyya Ameerikaa keessatti walgahii guddaa tokko irratti carraa argamee haasaa taasisuu argatee ture. Haasaa dheeraa inni godhe keessaa ani barruu gabaabduu armaan gadiif dhadhaabbata naaf ta’a kanan jedhe fudheera. Barruun Tuuttuu itti seensa barruu kiyyaaf miiltoo naaf ta’aaf malee seenaa isaa barreessuuf yaadeen miti. “Nama tokootu hallayyaarraa kufee osoo qilee hin buune gidduutti muka wayiitti rarra’ee hafe. Lubbuun kokkeetti isa ejjitee gargaarsaaf akka namni isaa dhaqqabu iyyee wawwaate. Namni iyya isaa dhagahee birmannaaf isaa dhaqqabe garuu naannoo sana hin turre. Haata’uutii sagaleen adda ta’e tokko nama kanatti hin mul’anne hallayyaa sana gamaa gamanatti gogoosee gurra isaa bu’e. Sagalee Waaqaati. ‘ ani Waaqa waan hundaa uume, kan waa hundaa gochuufis humna qabu dha. Yaa mucaakoo na amantaa sin oolcha’ jedhee gaafate. Eeyyeen yaa Waaqi sin amana na ooshi jedhee bohe namni rarra’ee qilee ofii gadittti ilaalaa lubbuun isa guraaraa jirtus. Waaqnis, ‘hayyee egaa na amanta taanaan muka qabattee jirtu san gadhiisii anatu osoo ati kuftee goda hin geenye harka bal’isii siqolata’ ittiin jedhe. Namni rakkoo keessa jiru kunis maal yaa Waaqaa si argaa hin jiru akkamiinan si amanee muka lubbuu na oolchee jiru kana gadhiisee na oolchita jedhee si abdadha jedhee muka sana daranuu jabeessee qabate. Yaa Waaqaa yoo ni dandeessa taate nattu mul’adhuutii si argee sitti amanee akkan harkakeetti of gadhiisu nagargaar, kanaachii muka kanatu sirra naaf wayya jedhee namni kun sagalee kadhannaa Waaqa garaa nyaatuun kadhate. Waaqa ijaan hin argine caalaa muka ijaan argee harkaan qabatee jiruttis abdatee ciniinnatee itti rarra’e.’’ Jedha ture haasaan luuba Tuuttuu yeroo sanaa gabaabumatti. Dismoondi Tuuttuun yeroo san waan kana jedhaniifii qabu turan. Animmoo amma waa jechuufan haasaa isaanii ciqlifadhe.
Qaaniitu xaxatee qehee Oromootti gale; wal ganuutu utubaa wiirtuu manaa ciniinee gadhiisuu dide. Beekaa Oromootu dungoo huubboo keessaa ta’e. Cobee, baqee qaama ofii dhabee saba isaa dukkana keessa jiru halagaaf dukkana saaqe. Qaroo sabaatu bakkee dhukkubu hooqee malaasuu lagatee osoo qarqara naannahee tuttuquu madaan Oromoo kulkulee hadhaa kuufatee dhikkifachuutti jira. Dhaloota hadhaa dhikkifatutti bu’ee malaasutu Oromoo keessaa dhibe! Garalaafettiin durbaa…..
Safuutu cabe; hoodatu bakkaa dabe. Kanatu Oromoo gabrummaa jalatti sakaalee bara baraan akka hudduu keessa dhiitamaa bulu godhe. Dhiitamanii buluun, halagaaf ergamuun, dhiiga ofiitti duuluun qaanii akka hin taanetti fudhatamee, dhaloonni kana akka mirgaatti ittiin dhaadatus uumame. Gobaanaatu Goobanoota hedduu horate!
Kanatu Oromoo Bilisummaa dhorkate!! Gatii Oromummaaf kennamutu xiqqaate!! Wal sobuufi wal sossobuutu diida keenya bareechee keessa keenya hoffaa hadaabolaa taasise. Kanaaf wareegama ilmaan kuma kitiliitti guduunfaa gochuu dadhabne. Sabni ilmaan tiruu tokkoo, afaan tokko dubbatu, aada tokko qabu, biyya tokkoof du’aa jiru, hiree takkittiif dhaabbatu, akka saba qomoon gargarii adda wal dhiibbachaa, adda kuma horachaa, wadaroo gabrummaa morma isaa hudhe guyyuu ofitti jabeessaa ooluun nama gaddisiisa, namas ceersa.
Kan addaan nu oofu caalaa kan waliin nu oofutu caala!! Yoo tokkummaa dhugaa tokko waan taaneef tokkoomuu qabnu kanaan tokko taane galiin tokko baaneef takkaan galma gaha. Kun hanqatee kan tokko ijaaru tokko diiga taanaan gidduu kanatu tokkotu taa’ee kan qabnu hundaa nyaata. Kan dhabne gootaafi beekaa miti. Kan dhabne wal amantaa gootaafi beekati. Qabsoon galma gahuu qabdi; Oromoonsi bilisoomuu qaba. Mana tokko ijjeeraa citaa tokko wal saamuu dhiisnee namuu bakka bakaa citaa finnee qabsoo keenya qaawwetti kabaa haa godhannu. Walii galan alaa galaniin mammaaksuma hogguu surrii keessaa nuqliilu qofa ta’ee hafuu hin qabu. Dhugaan walii gallee alaa haa gallu! Abbaan hin iyyatiin….
Rabbi milkii nu haa kennu; Deemnee haa hofkallu; Balas keenya haa ta’u, ajjeenee haa baannannu; Hamaan nu keessaa haa bahu, mirgi keenya haa ta’u; Amni hangamuu dheeratu, xurreen hangamuu jal’atu bilisoomuun waan hin oolle dha!!
← Oromiyaaf Gaarummaa Amantalaa
Korii Gamtaa Kutallee ABO Godiina Awurooppaa Milikiin Xumurame! →